ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် သတင်း | Ministry Of Information
တရားမ အထူးအယူခံမှု (၁၇) မှုကို စီရင်ချက်ချမှတ်၊ ရာဇဝတ် အထူးအယူခံမှု (၃) မှုနှင့် တရားမ အထူးအယူခံမှု (၂) မှုကို ရုံးထိုင်ကြားနာ
Post date: 10/15/2018 - 21:54
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ အားလုံးပါဝင်သော စုံညီခုံရုံးသည် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲက ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ရုံးခန်းအမှတ် (၁) ၌ ရုံးထိုင်၍ တရားမ အထူးအယူခံမှု (၁၇) မှုကို စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ ထို့ပြင် ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၃) မှုနှင့် တရားမ အထူးအယူခံမှု (၂) မှုတို့ကို ရုံးထိုင်ကြားနာခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှု (စာချွန်တော်)(၆မှု)စီရင်ချက်ချ၊ (၄) မှုကို ရုံးထိုင်ကြားနာ
Post date: 10/01/2018 - 20:14
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်အောင်နှင့် ဦးခင်မောင်ကြည် တို့ပါဝင်သည့် အပြီးသတ်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရေး အဖွဲ့သည် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲက ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ရုံးခန်း အမှတ်(၁)တွင် ရုံးထိုင်ပြီး တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှု (စာချွန်တော်) (၆)မှုကို စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး " ၁၀ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေဖိုရမ် " သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
Post date: 09/30/2018 - 11:01
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ဗလာဒီဗိုစတုတ်မြို့၌ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် "၁၀ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဖိုရမ် (10th Asia-Pacific International Legal Forum) " သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် ညပိုင်းတွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
(၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတရားသူကြီးချုပ်များကောင်စီ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တက်ရောက်
Post date: 03/29/2017 - 03:54
ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝမ်မြို့၌ မတ် ၂၄ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် (၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ တရားသူကြီးချုပ်များကောင်စီ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တက်ရောက်သည်။
Post date: 02/17/2017 - 06:39
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံး အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တက်ရောက်ပြီး ခရိုင်တရားရုံးသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ တရားရုံးချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Lord Neuberger နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Post date: 08/22/2016 - 07:55
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ တရားရုံးချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Lord Neuberger နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဘိုရာကေးကျွန်း၌ကျင်းပသည့် တတိယအကြိမ် အာဆီယံတရားသူကြီးချုပ်များ အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်
Post date: 03/10/2015 - 23:21
''တတိယအကြိမ် အာဆီယံ တရားသူကြီးချုပ်များ အစည်းအဝေး'' ကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဘိုရာကေးကျွန်းရှိ Shangrila Boracay Resort and Spa ၏ Halina Ballroom ၌ မတ် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိ ကျင်းပ ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ စင်ကာပူ-မြန်မာ ဥပဒေရေးရာ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး
Post date: 10/09/2014 - 21:34
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် စင်ကာပူသမ္မတ နိုင်ငံဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ စင်ကာပူ-မြန်မာ ဥပဒေရေးရာ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲ(၂)နာရီခွဲတွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ၊ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊တာဝန်ရှိသူများနှင့်ကုလသမဂ္ဂ၏မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအထူး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ မစ္စရန်ဟီလီတို့ တွေ့ဆုံ
Post date: 07/24/2014 - 09:48
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ မစ္စရန်ဟီလီသည် ယနေ့နံနက် (၁၁)နာရီ (၄၅)မိနစ်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားသူ ကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးအား ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
တရားရုံးများသည် ပြည်သူတို့၏ အရေးအခင်းများအတွက် နစ်နာသူများကို ကုစားပေးရန် တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်
Post date: 08/08/2013 - 23:21
ဥပဒေနှင့် တရားရုံးများသည် လူတစ်စုအတွက်၊ ပါတီနိုင်ငံရေးအတွက်၊ ချမ်းသာသူများအတွက်၊ အာဏာ ရှိသူများ၊ လူကုံထံ များနှင့် တရားစီရင်ရန် တာဝန်ပေးအပ်၊ ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသူများအတွက် မဟုတ်ကြောင်းဖြင့် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။